watchOS 7 inosanganisira modhi yevana | Ndinobva mac
watchOS 7 inosanganisira yemodi yevana
Chimwe chezvikonzero nei ndichive neApple Watch imhaka yemaringi atinofanira kuzadza zuva rese uye kusvika tora matambudziko. Iyo yekufambisa ine macalorie, yeyero yekurovedza muviri uye yebhuruu yekuramba wakamira. Izvi zvinokodzera vakuru asi zvinofanirwa kuyeukwa kuti kune vana vane zvakare Apple Watch. MuwatchOS 7 zvakaonekwa izvo mhete dzichachinja kugadzirisawo kune ava vadiki.
Mhete dzeApple Watch dzinogona kuchinja zvichienderana nekuti isu tinosarudza iyo nyowani modhiyo yevana
Kunyangwe zvisiri zvakajairika, kune vana vane Apple Watch, uye zvindori zvekufambisa izvo vanhu vakuru vanoedza kupedzisa ndezvavo zvakare. Asi iyo ine macalorie (iyo tsvuku) zvisina kukodzera zvakanyanya kwavari. Apple yafunga kuti mune remangwana vhezheni yeiyo inoshanda system, izvi, zvirinani, zvinofanirwa kuchinja.
Izvi zvakaonekwa mune nyowani software, modhi yevana inoitwa muhwindo. Kune izvi mhete dzichachinja zvishoma. Hatichazove neringi inoenderana nekushandisa macaloriki, asi pane kufamba. Rega nditsanangure, izvozvi iro rin'i inodanwa kudaro asi zvinoenderana nemakoriori atinoshandisa zvinoenderana nezvatinoita uye zvinoenderana neyedu basal rate. Muvana pfungwa iyi yakasiyana uye ndosaka zvinangwa zvichizadzikiswa zvichave zvekufamba chaiko kwemaminetsi makumi mapfumbamwe.
Nenzira iyi Iyo mhete tsvuku inoteedzera yako yekufamba nguva pamwe neyako yekurovedza nguva uye maawa anoshandiswa nechero chiitiko. Nenzira iyi, vana vanopihwa chinangwa chine hutano chekuzadzisa izvo usatarise pamufananidzo wemuviri.
Zvine musoro zvinotarisirwa, tinotarisira kuti iyi nzira itsva vana inosanganisira kudzora kwevabereki iyo inogumira kuwana kune mamwe maApple Watch maficha panguva yechikoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 7 inosanganisira yemodi yevana
Apple inoenderera ichishanda kubva kumba pazvinhu zvitsva
Zvese zvinotengwa zvinotanga kuonekwa: "Adaptivity" ndechimwe chazvo